Famonosana haingon-trano ho an'ny talantalana, Pu Corbels haingon-trano mitondra mpanondrana
Pintina sy varavarankely manodidina
Corbels sy brackets
Ny rindrina Nicheseth Wall
Hazo firehitra polyurethane
Tady jiro tsy mivantana
Fikoranan-javatra mora ampiasaina
Suntronic New Materials Technology Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:91% - 100% Certs:CE, ISO9001 Description:Famonosana haingon-trano ho an'ny talantalana, Corbel sy brackets, Pu Corbel Molding,Pu Corbels haingo, Ravaka haingon-trano,Polyurethane Corbels
Famolavolana poloney 
Nahary nandoko Cornice
Plate Cornice volavola
Famolavolana tontonana voasokitra
Famolavola tontonana misy takelaka
Mpamolavola vita amin'ny sary vita sokitra
Mpanolotsaina anatiny sy ivelany
Soavaly lakana / Medaly amin'ny fantsona
Pintina sy varavarankely manodidina 
Mpampiasa varavarana sy varavarankely
Door sy Window Window
Fikoranan-javatra mora ampiasaina 
Famolavola Cornice azo ampiasaina
Famolavola tontonana azo ampiasaina
Home > Products > Corbels sy brackets
Famolavolana poloney ( 108 )
Nahary nandoko Cornice ( 39 )
Plate Cornice volavola ( 33 )
Famolavolana tontonana voasokitra ( 17 )
Famolavola tontonana misy takelaka ( 19 )
Mpamolavola vita amin'ny sary vita sokitra ( 12 )
Plateau Plateau Plateau ( 10 )
Mpanolotsaina anatiny sy ivelany ( 3 )
Soavaly lakana / Medaly amin'ny fantsona ( 16 )
Tiles Lafatra ( 11 )
Ceilingeses ( 2 )
Pintina sy varavarankely manodidina ( 21 )
Mpampiasa varavarana sy varavarankely ( 11 )
Door sy Window Window ( 10 )
Tsanganana Polyurethane ( 11 )
Corbels sy brackets ( 11 )
Ny rindrina Nicheseth Wall ( 4 )
Hazo firehitra polyurethane ( 2 )
Haingon-trano polyurethane ( 13 )
Tady jiro tsy mivantana ( 5 )
Profil gorodona ( 10 )
Fikoranan-javatra mora ampiasaina ( 8 )
Famolavola Cornice azo ampiasaina ( 4 )
Famolavola tontonana azo ampiasaina ( 4 )
Ny vokatra avy amin'ny Corbels sy brackets , mpanofana manokana avy any Shina, Famonosana haingon-trano ho an'ny talantalana , Corbel sy brackets mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Pu Corbel Molding R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Habe kely PU Beam Corbels sy brackets
Haingon-trano Polyurethane Lunetta Corbel
PU Plain haingo fanaingoana
Polyurethane Edinburgh Corbels ny haingon-trano
PU Corbels haingo sy brackets haingo
PU Corbels haingo:
Habe polyurethane kely habe kely
Haingo polyurethane kely Odessa Corbel
Polyurethane Elebant Exotic Corbels
Sarivongana tsara tarehy Polyurethane Corbel
Vidin'ny singa: USD 6 - 7 / Piece/Pieces
Fonosana: 20PCS / CTN
Manana fahafaha-manao: 1500PCS/MONTH
Ny habe kely dia natao amin'ny ravina acanthus tsara tarehy, PU Beam Corbels sy Brackets dia faritra tsara manintona, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, talanty hazo ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe azo nofidina, dia handravaka ny singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao. Mety handoko na...
Vidin'ny singa: USD 6.14 - 6.8 / Piece/Pieces
Ny haingon-trano Polyurethane Lunetta Corbel dia vita amin'ny ravina acanthus, volon-tsofina ary modely amin'ny akorandriaka. Polyurethane Corbel dia singa tena manintona, ampiasaina amin'ny Curtain Rod, talanty hazo ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe azo nofidina, handravaka ireo singa hafa,...
Vidin'ny singa: USD 6 - 6.5 / Piece/Pieces
Plain Corbel dia singa tsara manintona, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, talantalana hazo ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe azo nofidina, dia handravaka ny singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao. Mety handoko na manintona loko ianao rehefa mahaliana anao. Ireo PU Corbels ireo dia miavaka...
Vidin'ny singa: USD 4 - 5 / Piece/Pieces
Ny Polyurethane Edinburgh Corbels dia vita amin'ny ravina acanthus, volon-tsofina ary modely amin'ny akorandriaka. Corbel dia singa tena manintona, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, talantalana hazo ary talantalana rindrina. Ny famolavolana endrika sy ny habe tokony hofidina, handravaka ireo singa hafa,...
Vidin'ny singa: USD 5.6 - 6.5 / Piece/Pieces
Ny polyurethane Foam Chesterfield Corbels dia vita amin'ny ravina acanthus, volon-tsofina ary modely amin'ny akorandriaka. Polyurethane Corbel dia singa tena manintona, ampiasaina amin'ny Curtain Rod, talanty hazo ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe azo nofidina, dia handravaka ny singa hafa,...
Vidin'ny singa: USD 2.2 - 3 / Piece/Pieces
PU Corbelses sy brackets haingoana PU dia singa tena mahaliana, ampiasaina ho an'ny maridalana Curtain, talanty hazo ary talantalana rindrina. Ny famolavolana endrika sy ny habe tokony hofidina, handravaka ireo singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao. Mety handoko na manintona loko ianao rehefa mahaliana anao....
Ny Corbels Polyurethane miaraka amin'ny Rose Design, ny Foiben'ny PU Foam dia singa manintona tsara, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, talantalana vita amin'ny rindrina ary talanton'ny rindrina. Ny famolavolana endrika sy ny habe tokony hofidina, handravaka ireo singa hafa, ento ny fahitana haingoo...
Vidin'ny singa: USD 2.2 - 2.5 / Piece/Pieces
Ny haben'ny Polyurethane Corbels kely dia tena miavaka amin'ny famolavolana sy ny asany. Ireo fampiasa amin'ny alàlan'ny rindran-damody urbane dia mety hitondra fahasamihafana lehibe any an-dakozia, efitra fandroana, fidirana, firehitra manodidina ary maro hafa. Ity fitaovana ity dia tonga lafatra...
Vidin'ny singa: USD 1 - 1.2 / Piece/Pieces
Ny haingon-trano polyurethane kely Odessa Corbel dia entana lafo indrindra. Polyurethane Corbel dia singa tena manintona, ampiasaina amin'ny Curtain Rod, talanty hazo ary talantalana rindrina. Kely sy tsara tarehy io corbel io, hany ka misy varotra tsara isan-taona. Ny famolavolana endrika sy ny habe tokony...
Vidin'ny singa: USD 36 - 40 / Piece/Pieces
Fonosana: 2PCS / CTN
Manana fahafaha-manao: 900PCS/MONTH
Polyurethane Elegant Exotic Corbels dia singa tena manintona, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, talantalana vita amin'ny rindrina ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe samihafa tokony hosafidiana d, Corbels sy brackets de corate miaraka amin'ireo singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao....
Ny sarivongana kanto Polyurethane Corbel dia singa tena manintona, ampiasaina amin'ny Curtain Rod, talantalana hazo ary talantalana rindrina. Ny endrika sy ny habe samihafa tokony hofidiana, ny sarivongana kanto Polyurethane Corbel dia voaravaka singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao. Mety handoko na...
Shina Corbels sy brackets mpamatsy
PU Corbels sy Brackets dia singa tsara manintona, ampiasaina ho an'ny Curtain Rod, betirindrina ary talantalana rindrina.
Drafitra sy habe samihafa tokony hofidina, handravaka ny Corbels sy brackets miaraka amin'ny singa hafa, ento ny fahitana haingoo vaovao.
Afaka mandoko na manintona loko ho an'ny PU Corbels and Brackets ianao (Rakotra haingon-trano ho an'ny talantalana, Corbel sy brackets, Pu Corbel M fanoratana, ny Corbels haingon-trano, Corbels haingon-trano vita amin'ny haingon-trano).
1.Can fanampiana hatramin'ny 10kg miaraka amin'ny fametrahana mety.
2. Azo atao solomaso, ahosotra, arina na aotao.
3. Arotsaka amin'ny fotsy ary vonona ny handoko na vita amin'ny faux.
4. Azo ampiasaina ao anaty na ivelany anatiny
5.High mety ho polyurethane ho an'ny habaka farany sy ny antsipirihany.
6. Namboarina taorian'ny lamina ara-tantara sy ny endrika taloha.
1. Kalitao tsara indrindra
2. Fotoana famokarana fohy
3. vidiny tsara indrindra
4. Serivisy afrikana tsara
Famoronana Crown Polyurethane malaza
Famolahan-jiro vita amin'ny Polyurethane Plain Cornice
Famolavola vatolampy haingo ambony
PU Cice Cornice ho an'ny fanoratana anatiny
Famolavolana haingon-trano Polyurethane tsara indrindra
Blaogin'orinasa PU ho an'ny rindrina
Famoronana karama manify
Blaidin'ny PU ho an'ny fiarovana ny fanamafisana amin'ny rindrina
Vidiny ambany ambany Soavaly birao haingon-trano PU
Famolavolana tontolon'ny haingo polyurethane
Tuscan tsanganana ho an'ny anatiny sy ivelany
Varavarana anatiny sy fanaka varavarankely
Norito Ceiling Medallions ho an'ny fanamorana maivana
Famolavola tontonana haingon-trano sy asa an-asa
Atolotry ny Architectural anatiny sy famolavolana
Ao anaty sakana famataran-dàlamby korana ho an'ny famolavolana Polyurethane
Atody Type Polyurethane Ceiling Rose
Fanaka vita amin'ny haingon-trano polyurethane
European Pu Drafitra Plain Cornice fananganana
Ambony vita amin'ny haingon-trano vita amin'ny polyurethane lehibe
Famonosana haingon-trano ho an'ny talantalana
Corbel sy brackets
Pu Corbels haingo
Famolavolana haingon-trano ho an'ny rindrina
Fihaingoana Corbel ho an'ny talantalana
Famonosana haingon-trano ho an'ny talantalana Corbel sy brackets Pu Corbel Molding Pu Corbels haingo Ravaka haingon-trano Polyurethane Corbels Famolavolana haingon-trano ho an'ny rindrina Fihaingoana Corbel ho an'ny talantalana
Copyright © 2020 Suntronic New Materials Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.